Wararka - Taxadarka isticmaalka iyo dayactirka alumina -ka cad ee la isku daray
Corundum Cufan oo La Fuulay
Alumina Fused Alumina Magnesia Spinel
Monocrystalline Alumina Fused
Aqoon -isweydaarsiga Wax -soo -saarka & Khadka Wax -soo -saarka
Cilmi -baarista & Horumarka
Taxadarka isticmaalka iyo dayactirka alumina cad -cad ee la isku daray
Nooca ugu badan ee corundum abrasive ee warshadaha wax soo saaraya waa caddaan alumina isku dhafan. Waa mid aan laga maarmi karin geedi socodka warshadaha. Cimiladu waxay ahayd mid dhowaan qoyan. Sideen u qaadnaa tallaabooyin aan biyuhu ilaalin iyo dayactirka caddaankaalumina isku dhafan? Kuwa soo socdaa waa sharraxaad kooban oo gaar ah:
1. Waxqabad aad u fiican: Walumina hite fused waxaa loo isticmaali karaa nadiifinta iyo shiidi, birta aan birta lahayn, birta xawaaraha sare leh iyo biraha kale; iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ciid -baabi'inta, wax -soo -saarka giraangirta, iwm; Waxaa sidoo kale si weyn loogu adeegsadaa dhoobada kala duwan sida shubista saxda ah, bir -celinta birta, diidmada kiimikada, 95 korantada korantada ah, galaaskii qurxinta iyo foornada ee nolol maalmeedka; sidoo kale warshado tiknoolajiyad sare leh sida warshadaha milatariga iyo qalabka elektarooniga. Adkaanta alumina -ka cad ee la isku daray ayaa xoogaa ka sarreysa tan corundum bunni ah. Waxay leedahay xoogaa xoogaa ka hooseeya, daahirnimo sare, is-afaysi wanaagsan, karti shiidid xoog leh, jiil kulayl hooseeya, hufnaan sare, aashitada iyo iska caabinta daxalka alkali, iska caabin heerkulka sare, iyo xasilooni kuleyl wanaagsan.
2. Daaweynta biyuhu: Wnacayb alumina isku dhafan abrasives, oo ay ku jiraan caddaan alumina isku dhafan budo, cad alumina isku dhafan ciid iwm. Waxay u baahan tahay inay ahaato mid aan biyuhu iyo qoyaan-caddayn inta la isticmaalayo, kaydinta iyo dayactirka maalin kasta. Si aan si fiican ugu adeegsanno.
3. Waa la iska ilaalin karaa: wakiilka difaaca wuxuu siiyaa ilaalin buuxda caddaanka alumina isku dhafan sifooyin kala duwan, sida gelitaanka qoyaanka, wasakhda, wasakhda saliidda, iwm, sidoo kale waxay ka hortagtaa in cusbada macdanta laga soo saaro dhagaxa, taasoo keenta ubax cad ama wasakhda daxalka. Corundum -ka cad ayaa ah midka ugu nugul inuu muuqdo wayna adag tahay in laga fogaado waa wasakhda biyaha. Xaaladaha caadiga ah, wasakhda biyaha ayaa la sii deyn karaa waqti cayiman gudahood, laakiin wasakhda biyaha ayaa laga yaabaa in aan lagu beddelin xaaladaha qoyan iyo roobabka muddada dheer. Marka la keydiyo sannadka oo dhan, walxaha wasakhaysan waxay saamayn ku yeelan doonaan corundum -ka cad, waxaana kaliya oo la xallin karaa isugeynta dhagaxa dhagaxa.
Waqtiga dhejinta: Apr-06-2021
No.1 Wanquanhe Road, Degmada Shangjie, Zhengzhou City, Gobolka Henan, Shiinaha